पाँच वर्ष खेर फालेकाले ओली अभियुक्त हुन् : गगन थापा – Upahar Khabar
पाँच वर्ष खेर फालेकाले ओली अभियुक्त हुन् : गगन थापा
प्रकाशित मिति : २७ बैशाख २०७९, मंगलवार १८:१७ May 10, 2022
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाँच वर्ष खेर फाल्ने कार्य गरेकाले अभियुक्त भएको टिप्पणी गरेका छन् । मतदातालाई ओलीले जवाफ दिने समय भएकाले ओली अभियुक्त भएको उनले जिकिर गरे ।
प्रधानमन्त्रीकै रुपमा भृकुटीमण्डपमा ओलीले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा कांग्रेसलाई धारेहात लगाउँदै पूर्व–पश्चिम गरिरहेको थापाले आपत्ति जनाए । चुनावी सभाको अन्तिम दिनमा भुकृटीमण्डपमा एमालेले सभा गरिरहेको छ । असनबाट गठबन्धनको सभामा बोल्दै गर्दा थापाले भने,‘अहिले भृकुटीमण्डमा बोल्दै गर्दा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीकै रुपमा बोलेको हुनुपर्ने हो कि होइन ? संसद भंग किन गरेको हो ? मूल झगडियाले माफी माग्नु पर्छ कि पर्दैन ?’